"ညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သူသည်တရားရုံးကိုပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားသော 'ညစ်ညမ်းပရော်ဖက်ဆာ' အားတရား ၀ င်အောင်နိုင်မှုအားအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်" (LifeSiteNews) - Your Brain On Porn
“ ညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သူသည်တရားရုံးကိုပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားသော 'ညစ်ညမ်းပရော်ဖက်ဆာ' အားတရား ၀ င်အောင်နိုင်မှုအားအသေးစိတ်ဖော်ပြသည် "(LifeSiteNews)
ဂယ်ရီ Wilson သည်သူ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်မည်သို့အန္တရာယ်ရှိသည်ဟူသောသူ၏လက်ရှိသုတေသနကိုရှုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်သူ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လူးစေသောနီကိုးလ်ပရော့စ်ကတရားစွဲခဲ့သည်။ သူနိုင်ခဲ့တယ်။ (*)
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ် ၂၆ ရက် (LifeSiteNews) - နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလုံးဝပျက်စီးစေသည့်အထောက်အထားများတိုးများလာနေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကိုအဓိကထားဖော်ပြရုံသာမကလူငယ်များအကြားတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမျိုးဆက်တစ်ခုလုံး၏ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ပုံဖော်ပေးခဲ့သည်။ Exodus Cry ၏ Laila Mickelwait သည် တသမတ်တည်းမီးမောင်းထိုးပြ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုပြသပြီးလူကုန်ကူးခံရသူများ၏ဗီဒီယိုများပုံမှန်လွှင့်တင်သော PornHub ၏ဆိုးရွားလှသည့်အလွဲသုံးစားမှုများ။
ဒီတော့ဘာကြောင့်များစွာသောပညာရှင်တွေဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုတသမတ်တည်းခုခံကာကွယ်ကြတာလဲ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကဟူစတန်၌ပြုလုပ်ခဲ့သောကွန်ဖရင့်၌အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ထိပ်တန်းပညာရှင်များမှဒေါက်တာမေရီအန်းလိုင်ဒန်၏ဟောပြောချက်ကိုကျွန်ုပ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမအား“ ညစ်ညမ်းသောပရိုဖိုင်းများ” ဟုခေါ်ဝေါ်သောလက်တဆုပ်စာဟုခေါ်သောပညာတတ်အချို့သည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုသူတို့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ခုခံကာကွယ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ လာသော Gabe Deem မကြာသေးမီကငါ့ Podcast တခုကိုအပေါ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ဗီဒီယိုတစ်ကားကို ယခုသီတင်းပတ် Porn Playbook မှ Dr. David Ley နှင့် Dr. Nicole Prause တို့ကဲ့သို့သောပညာရှင်များသည် PornHub ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများအားမည်သို့ကာကွယ်ရန်“ disinform, defame and deny” ကိုရှင်းပြသည်။
ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ဘာသာရေးကိုဝေဖန်သူတွေကတောင်မှတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ နာမည်ကြီး“ Your Brain On Porn” ဆိုသည့် site ကိုတည်ထောင်သူ Gary Wilson သည်ထိုသို့သောဝေဖန်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ့ကို“ porn prof” Nicole Prause ကတရားရုံးသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမည်သို့အန္တရာယ်ရှိသည်ဟူသောသူ၏ဆက်လက်သုတေသနပြုမှုကိုရှုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်သူ့ကိုလူးစေခဲ့သည်။ သူကအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် Prause ကသူနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ပြောခဲ့ခြင်းနှင့်သူမအပေါ်မကြာသေးမီကတရား ၀ င်အောင်နိုင်မှုသည်မည်မျှအရေးကြီးကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။
LifeSite: လက်တဆုပ်စာမှပညာရှင်များသည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားစွာခုခံနိုင်သနည်း။
Wilson: လိင်ဗေဒပညာရှင်များ၏သြဇာအရှိန်အဝါသရုပ်ဆောင်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအကြားကြာမြင့်စွာနီးကပ်စွာမဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ IASR (လိင်သုတေသနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကယ်ဒမီ) ၏တရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Iboy ကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ Playboy Enterprises မှ Kinsey Institute သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ Hugh Hefner၊ နိုင်ငံတကာသုတေသနသုတေသနအကယ်ဒမီနှင့်၎င်း၏တည်ထောင်သူဥက္ကPresident္ဌ ရေတံခွန်။ ထင်မြင်ချက်အဟောင်းများသည်အနည်းဆုံးနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကဲ့သို့ Kinsey ကျောင်းသားများအလယ်တွင်သေဆုံးနေပုံရသည်။
Jonathon van Maren ကိုလိုက်နာပါ ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာ
LifeSite: Nicole Prause ကဘယ်သူလဲ၊ သူကဘာကြောင့်ညစ်ညမ်းတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းကိုခုခံကာကွယ်ရတာလဲ။
Wilson: နီကိုးလ် Prause, Ph.D ဘွဲ့ကို Kinsey Institute မှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး၊ သူမသည်သုတေသနပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ရာအချို့သည် အကြီးအကျယ်ဝေဖန် သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်စာပေ၌တည်၏။ သူမသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနပြုချက်ကိုလျစ်လျူရှုထားပြီး၎င်းသည်အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အသံကိုထောက်ခံအားပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည်“ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှု” ကိုစာရွက်နှစ်ချပ်ဖြင့်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးရလဒ်များသည်ကျွမ်းကျင်သူအမျိုးမျိုးတို့၏ထင်မြင်ချက်အရစွဲလမ်းပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အလွန်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိသူဖြစ်သည်။ (ကြည့်ပါ နီကိုးလ် Prause လွှမ်းမိုးမှုကို Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း)
လူအနည်းငယ်သာယင်းကိုသိကြသည် Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့သောဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များရှိသည့်အနည်းဆုံးဝက် (ဘ်) ဆိုဒ် ၂ ခုကိုတိတ်တဆိတ်ဖန်တီးခဲ့သည်:
၂၀၁၆ -PornHelps၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွစ်တာအကောင့် (@pornhelps) ရှိသောညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုအားပေးသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄ င်း၏လှုပ်ရှားမှုများတွင်ညစ်ညမ်း၏“ အပြုသဘောဆောင်သော” ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြသည့်အပြင်ပြင်ပလေ့လာမှုများကိုတွန်းအားပေးခဲ့သည်။ “ PornHelps” သည်နာတာရှည် Prause သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တူညီသောလူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုကြာရှည်စွာအမှတ်အသားပြုသည်။ @pornhelps တွစ်တာအကောင့်နှင့် PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်နှစ်ခုလုံး Prause သည် PornHelps အဖြစ်ထွက်သွားသောအခါရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်လိုက်သည်။
2019 - ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ချီးမွမ်း RealYBOP တွစ်တာ နှင့် RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ထို့အပြင်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုတို့တွင်ပါ ၀ င်နေသည် me, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည်NCOSE Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား RealYBOP“ ကျွမ်းကျင်သူများ” လည်းပါ ၀ င်သည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) ။ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများကို porn စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္sာရီဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်စေရန်ဖြစ်သည်။ Prause (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်တဲ့မန်နေဂျာ RealYBOP တွစ်တာ) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူတင်းကျပ်စွာ နှင့် RealYBOP Twitter ကိုအသုံးပြုသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။ ဒီဆိုဒ်အသစ် (ငါ့အတွက်မဟုတ်) RealYBOP ကိုဖော်ထုတ်သည် - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အစစ်အမှန် - အချက်အလက်ကိုဖော်ထုတ်ပါ.
Wilson: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ Prause သည်ကျွန်ုပ်အားအသိပေးခြင်းမရှိဘဲယာယီတားမြစ်မိန့်ကို (ကျွန်ုပ်အားသူမအတွက်အန္တရာယ်ပေးသည်ဟုဆိုသည်) တင်သွင်းခဲ့သည် (၎င်းသည် Prause တွင်နောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ခုနစ်နှစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအစိုးစံ) ။ ကန ဦး တရားသူကြီးကဒါကိုငြင်းပြီးမတ်လကြားနာတဲ့နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးတယ်။ ဒါကဒုတိယကြားနာမှုနေ့ကိုရောက်စေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Prause ကငါ့ကိုအရင်ဆုံးအလုပ်မလုပ်သေးဘူး။
လာမယ့်သုံးလအတွက်, Prause သူ့ကိုယ်သူမှဂယက်ရိုက်ခြင်းမရှိဘဲသူမ၏လိမ်လည်မှုတားဆီးအမိန့်ကျဆင်းသွားနိုင်ဘူး။ ဇူလိုင်လအတွက်သတ်မှတ်ထားသောတားမြစ်မိန့်ကြားနာခြင်းသို့တက်ရောက်ရန် LA သို့ဆွဲခေါ်ခြင်းမခံရရန်ဇွန်လတွင်ငါတားမြစ်ထားသည့်အမိန့်ကိုဖယ်ရှားပေးရန် SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ SLAPP သည်“ ပြည်သူလူထုပါ ၀ င်မှုအားဆန့်ကျင်သောမဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု” ကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်သူမအားကျွန်ုပ်အားနှုတ်ပိတ်ရန်အတွက် RO ကိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာမှာအကုန်အကျများသောဥပဒေရေးရာအသွင်အပြင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ SLAPP ကိုဆန့်ကျင်သောဥပဒေများမှာ၊ လူတွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ် သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးပြင်ဆင်ရေးအခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးနေသောလူတွေကိုခြိမ်းခြောက်ဖို့တရားရုံးများကိုအသုံးပြု။ မှ။
သူမကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုနှိပ်ကွပ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ SLAPP အဆိုကိုတင်ခဲ့သည် (သူမ၏လေ့လာမှုများနှင့်ပြောဆိုချက်များကိုကျွန်ုပ်ဝေဖန်ခဲ့သည်)၊ သူမ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သက်သေအထောက်အထား YBOP မှနှင့်သူမအပေါ်အမှုဖွင့်ထားသည့်အသရေဖျက်မှုနှစ်ခုဖြင့်သက်သေများကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်း (Donald ဟီလ်တန်, MD နှင့် Nofap တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes) ။ သူမ၏ MO သည်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များအကြောင်းပြောဆိုသူများအားနှုတ်ဆိတ်နေစေရန်ခြိမ်းခြောက်ရန်ဖြစ်သည်။ လုံလောက်ပါတယ်။
ထွက်လာသည်နှင့်တရားသူကြီးသည်ကိစ္စနှစ်ခု (ပေါင်းစပ်ထားသည့်အမိန့်နှင့် SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှု) ကိုပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး Prause နှင့်ကျွန်ုပ်သည် (COVID-19 ကြောင့်) အဝေးမှပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျေးဇူးတင်စရာ၊ သူမအနားကဘယ်နေရာကိုသွားမသွားဖို့ငါ့ကိုနှမြောခဲ့တယ်။
သြဂုတ်လ ၆ ရက်ကြားနာခြင်းမတိုင်မီလေးတွင်သူမ၏ရှေ့နေကသူမကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမှမအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူ၏အကြောင်းပြချက်များထဲမှတစ်ခုမှာသူ၏ကြေငြာချက်အရသူမသည်သူမအားမကောင်းသောလုပ်ရပ်များဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုမူရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူကသူမခွင့်ပြုချက်မရှိသော“ သက်သေအထောက်အထားများ” (သူမ၏သူငယ်ချင်းများထံမှစာများ၊ ထောက်ခံမှုမရှိသောစွပ်စွဲချက်များ) ကိုတင်ပြရန်သူကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူမတင်ပြခဲ့သောစာရွက်စာတမ်းမှကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်၎င်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဟုသံသယရှိသည်။
ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူမ Twitter တွင်ကြေညာခဲ့သည် သူမကကျွန်တော့်ကို“ အကာအကွယ်အမိန့်” ရခဲ့တယ် (လုံးဝမမှန်ပါဘူး) တရားသူကြီးကသူမရဲ့ရှေ့နေကိုဆက်လက်တောင်းခံရန်သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့စွဲကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ကြားနာပြီးတဲ့အခါတရားသူကြီးကကျွန်တော်မျက်နှာသာပေးလိုက်တယ်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးအဆိုကိုပေးရန်တရားသူကြီးသည် (၁) သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကို၎င်း၏အရည်အချင်းများအရအောင်မြင်ရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းနှင့် (၂) အမှန်မှာ၊ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်၏အခွင့်အရေးကိုဖိနှိပ်ရန်ကြိုးပမ်းသည် (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏ပုံသဏ္groundာန်များသည်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်).
နောက်ဆုံး ပိုမို၍ အသေးစိတ်ကျသောအမိန့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ တရားသူကြီးကလက်မှတ်ထိုးပြီးလျှင်သူသည်ကျွန်ုပ်ရှေ့နေအားပေးသောရှေ့နေအခကြေးငွေများကိုကျွန်ုပ်၏အတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုပေးရလိမ့်မည်။ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးဝတ်စုံများ ဗစ်တာအားရှေ့နေချုပ်အခကြေးငွေကိုအလိုအလျောက်ချီးမြှင့်သည်, ဒါပေမယ့်တရားရုံးအားဖြင့်ပမာဏကိုပထမ ဦး ဆုံး "ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ" ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာအလုံးစုံအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
LifeSite: ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း၊ လူများသိရန်အဘယ်အရာလိုအပ်သနည်း။
Wilson: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းမှုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့နီကိုးလ်ပရာ့စ်ဟာအညီအမျှအစီအစဉ်ကို ဦး ဆောင်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ညစ်ညမ်းမှုရဲ့ဆိုးကျိုးတွေအကြောင်းပြောတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆိတ်သွားအောင်နှိမ်နှင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အသံကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအားဖြင့် Prause သည်ကျွန်ုပ်၏တရားဝင်အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောခုနစ်နှစ်တာကာလအတွင်းသူမသည်ကျွန်ုပ်အား“ ကာယရေးသမား၊ ”“ အဖြူ supremacist”၊ “ လိမ်လည်မှု၊ ”“ pseudos သိပ္ပံပညာရှင်” နှင့်“ Mormon porn collector” ကဲ့သို့သောအရာများဖြစ်ကြောင်း၊ ကွန်ပျူတာများ” နှင့်သေခြင်းနှင့်မုဒိမ်းမှုခြိမ်းခြောက်မှုများပေးပို့ခြင်း။ (ဒါကဒါပါ အလွန် အတိုချုပ် - ဒီမှာအများကြီးပို: စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3။ ) တစ် ဦး ဘေးဖယ်အဖြစ်သူမလည်း ငါ၏အကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်ထားရန်ရှာကြာခဲ့သည် (YBOP၊ YourBrainOnPorn)၊ နေတုန်းပဲ သူတို့ကိုအပေါ်ချိုးဖောက် (RealYourBrainOnPorn.com); ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုသူမရဲ့အခြေအမြစ်မရှိတားမြစ်မိန့်ကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်။
သူမသည်အခြားသူများအားအလားတူအရာများအားသုတေသီများ၊ ဆေးဆရာ ၀ န်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ ယခင် UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Reward Foundation၊ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ Belinda Luscombe၊ ပါမောက္ခများ၊ IITAP၊ SASH၊ မူးယစ်ဆေးအသစ်ကိုတိုက်ဖျက်ခြင်း၊ ထွက်မြောက်ရာ Cry၊ NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced, ပညာရေးဂျာနယ် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ, ၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီ MDPI, US ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ, ပညာရေးဂျာနယ်၏အကြီးအကဲ CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်းအမည်ကိုဖော်ပြရန် (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ).
မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်မည်မျှကွာခြားနေပါစေအသရေဖျက်မှုသည်သူမ၏အသရေဖျက်မှုအတွက်လက်တွေ့ကျသောကုစားနည်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တရား ၀ င်အခကြေးငွေသည်သူမ၏သားကောင်များအတွက်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ ရနိုင်သော်လည်း Prause အတွက်ဒေါ်လာသုညကုန်ကျသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမအာမခံကုမ္ပဏီကသူမရဲ့ကာကွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဒီဝတ်စုံတွေနဲ့ဖုံးထားလို့ပါ။ ထို့ကြောင့် Prause သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများကို (သူမအပေါ်အသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုသူနှစ် ဦး အပါအ ၀ င်) ကိုသတ္တိရှိရှိဆက်လက်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်း၊ ဒွန် Hilton နှင့် အဲလက်စ်ရော့ဒ်) ။ သူမသည်ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမပေးရဘဲသူမ၏သားကောင်များကိုခြောက်သွေ့စေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ Prause ကသူမရဲ့အခြေအမြစ်မရှိတားမြစ်မိန့်ကိုတောင်းခံခဲ့ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ မှလွဲ၍ အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး ကံကောင်းထောက်မစွာပင်တရားသူကြီးကသူမ၏တားမြစ်ချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုကာကွယ်ရန်ဒေါ်လာထောင်ချီ။ အတင်းအကျပ်ငွေပေးစေခြင်းအားဖြင့်ငါ့ကိုနှုတ်ပိတ်ရန်တရားမ ၀ င်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းသဘောတူခဲ့သည်
LifeSite: Prause သည်လူမှုရေးမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် (ကိုယ့် podcast ပေါ်သို့လာသူ Gabe Deem ကဲ့သို့) မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအားစွပ်စွဲချက်များအပေါ်မည်သို့တုံ့ပြန်သနည်း။
Wilson: ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းသူသည်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များစွာနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုအထင်အမြင်လွဲမှားသောနည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ရပ်များ၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပြောဆိုသူများ၏ဂုဏ်သတင်းကိုဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြိုးစား။ မှန်ကန်သောဝါဒဖြန့်သည့်နည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သက်သေအထောက်အထားများကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါက၊
သူမ၏စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောမေးခွန်းများမေးသောအခါကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အထောက်အထားများဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှရိုးသားစွာဖြေဆိုရန်ကြိုးစားသည်။ လိုအပ်သည့်အခါသူမအနေဖြင့်သူမ၏ခိုင်မာသောတားမြစ်ချက်အမိန့်တောင်းဆိုခြင်းနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရယူရန်နှင့်ချိုးဖောက်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းကဲ့သို့သောသူမ၏ရန်လိုသောလုပ်ရပ်များမှကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်“ ရှေ့နေတက်” ခဲ့သည်။
Jonathon ရဲ့ Podcast အသစ်, The Van Maren ပြပွဲ, ဘဝလိုလားသူနှင့်မိသားစုလိုလားသူလှုပ်ရှားမှု၏ပုံပြင်များပြောပြရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။ ဗြိတိန် ၀ န်ကြီးချုပ်မာဂရက်သက်ချာအတွက်မိန့်ခွန်းရေးသူစာရေးဆရာဂျွန်အိုစလီဗန်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ်အင်တာဗျူး။ စာရေးသူနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏စာစီစာကုံးကိုအမျိုးသားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွင်ဖော်ပြထားပြီး၊ အိုအက်စ်လီဗန်သည်နိုင်ငံတကာရေးရာနှင့်ရှေးရိုးစွဲဝါဒမှသည် Brexit နှင့် Black Lives Matter အထိအရာရာတိုင်းကိုသူ၏အတွေးများဖြင့်မျှဝေသည်။ သင်စာရင်းသွင်းနိုင်သည် ဒီမှာ နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲနားထောင်ပါ။
* ဂယ်ရီ Wilson ထံမှမှတ်စု: ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းမှုဆန့်ကျင်သူ (သို့)“ လူဆိုးဂိုဏ်း” ဟုမရှုမြင်ပါ။ ကျန်အပိုင်းများတွင်ခိုင်မာသောသတင်းအချက်အလက်များစွာရှိပါသည်။